गाडी बनाएका सिकर्मी वीरबहादुरलाई गैंडाकोट ६ द्वारा पुरस्कृत - समृद्धि खबर
गाडी बनाएका सिकर्मी वीरबहादुरलाई गैंडाकोट ६ द्वारा पुरस्कृत
समृद्धि खबर, २४ असार , गैंडाकोट ।
गैंडाकोट नगरपालिका वडा नं. ६ का एक सिकर्मी वीरबहादुर विकलाई ६ नं. वडा कार्यालयले सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरेको छ । अत्यन्तै पौरखी व्यक्तिका रुपमा कौशलता प्रर्दशन गरेका स्थानीय गैंडाकोट वडा नंं. ६ स्थित शिवनगर टोल बस्ने वीरबहादुरलाई प्रोत्साहन गर्दै सम्मान गरिएको गैंडाकोट– ६ का वडा अध्यक्ष लक्ष्मिप्रसाद सापकोटाले बताउनुभएको छ ।
विगतदेखि सिकर्मी पेसा गर्दै आएका वीरबहादुरले डेढ वर्षको मेहेनतले ४ चक्के गाडि बनाएका हुन् । उनले फुर्सदको समयको सदुपयोग गर्दै करिब ५ देखि ७ जनासम्म बस्न मिल्ने गाडि बनाएको समृद्धि खबरलाई बताएका छन् ।
उनलाई मंगलबार नगद रु. २० हजार रुपैयाँ राशीको पुरस्कारबाट वडा कार्यालयले सम्मान गरेको वडा अध्यक्ष लक्ष्मिप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभएको हो । वडाका सबै जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उनलाई सम्मान गरीएको अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिनुभएको हो ।
यस्तै उनको सिप र कौशलताबाट प्रभावित भइ गैंडाकोट ६ का एक वडा सदस्यले व्यक्तिगतरुपमा समेत पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको छ । यसरी पुरस्कार दिनेमा सोही वडाका वडा सदस्य पवित्रा अधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँले नगद ५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको हो ।
यसैबीच सम्मानीत एवं पुरस्कृत भएका वीरबहादुरले वडा कार्यालयको सम्मान पछि आफुलाई धेरै हौसला मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अब आगामि दिनमा थप उर्जावान बन्दै नयाँ अविस्कार गर्न लाग्ने बताए । उनले यस अघि वडा आसपासका मन्दिरमा राखिने भगवानका मुर्तिहरु निर्माण गरिसकेका छन् ।
# business # localnews # News # popular
Labels: business, localnews, News, popular